I-trailer kaRobitel 'Igumbi lokuphunyuka' iyindlela ekhohlisayo - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-trailer kaRobitel 'Igumbi lokuphunyuka' iyindlela ekhohlisayo
I-trailer kaRobitel 'Igumbi lokuphunyuka' iyindlela ekhohlisayo
by UTimothy Rawles October 19, 2018
by UTimothy Rawles October 19, 2018 842 ukubukwa
Kuyindlela yakudala yokuvulwa kwe-trailer ne "Little Boxes" kaMalvina Reynolds, yebhayisikobho ekhuluma ngabantu abazama ukubalekela besebenzisa ubuhlakani babo kuphela.
Lokhu kusethwe kahle ngegama lika-Adam Robitel Igumbi Escape ongena ezinkundleni zemidlalo yeshashalazi ngoJanuwari 2019. URobitel nguyena obebukelwa kusukela kwakhe Ukuthatha kukaDeborah Logan waba yiculo lamahlelo. Ulandele lokho ngempumelelo enkulu Ekhohlisayo: Ukhiye Wokugcina.
Ukusuka ekubukekeni kwefilimu yakhe yakamuva, uhambisana nengqikithi engaphezulu kwemvelo kepha uhlanganisa iziza ezisontayo neziphendukezela njengamaphazili asemzimbeni. Uma kwenzeka uzalwe izolo isihloko sibhekisa kumcimbi omkhulu wokuhlangana komphakathi selokhu kwavela i-karaoke.
Umdlalo wangempela uqala ngokubeka iqembu labantu ekamelweni elinengqikithi enesikhathi esabiwe sokuthola indlela yokuphuma ngaphambi kokukhala kwe-alamu. URobitel uthathe lowo mqondo futhi wawenza wasolisa kakhulu futhi wesabisa.
Nayi i-synopsis esemthethweni:
“Igumbi Lokubaleka ijabulisa abantu abangaziwa abayisithupha abazithola besesimweni esingaphezu kwamandla abo futhi kufanele basebenzise ubuhlakani babo ukuze bathole umkhondo noma bafe. ”
Igumbi Escape izovulwa kumatiyetha ngoJanuwari 2019.